Daandiin gara Tigraay geessu cufameeraa? - BBC News Afaan Oromoo
Daandii guddaan Finfinnee ka'ee naannoo Amaaraa qaxxamuruun gara naannoo Tigraay geessu cufamera dubbiin jedhurratti yaadiwwan garaagaraa ka'aa jira. BBC'n aangawoota naannolee Amaaraa fi Tigraay dhimmichi isaan ilaallatu dubbiseera.
Hoogganaa biiroo gejibaa naannoo Amaaraa dabalatee aanga'ootni naannichaa biroon daandiin hin cufamne yoo jedhan, Biiroon Geejibaa naannoo Tigraay gama isaan yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e uummatni daandii irra imalu jijiireera jedhu.
Hoogganaan qajeelcha geejibaa godina Kaaba Walloo Tsahaaynew Siisaay, yeroo ammaa imalli gara Finfinneettis ta'e Finfinnee gara Maqalee nannoo Amaaraa keesa qaxxamuruun godhamu danqaa malee gaggeefamaa jira jedhu.
Kaaba Walloo keessa daandiin cufamuurraa kan ka'e sochiin tiraafikaa danqame tokkollee akka hin jirre himaniiru.
Ji'oota dura dargaggootni magaala Qobboo namoonni hidhaman haa hiikaman sababa jedhuun daandii gara Allaamaaxaa geessu guyyootaaf cufanii turan.
Dabalataaniis karaa Waldiyaa hoolota gara Maqaleetti fe'amanii deeman fi miidhaan konkolaattota fe'isaan gara naannoo Tigraay geejibsiifamaa turan irratti naannoo Amaaraa keessatti saamichi raawwateera.
Sababoota kanaan daandiin biraan karaa naannoo Affaar keessa bahu akka filannootti fudhatamee uummatni itti fayyadamaa jiru odeeffannoon jedhu hedduu haasa'ama.
Konkolaattotni hedeuun daandii isa Affaar keessa bahu filachuu isaanii amananii sababni garuu akka jedhamaa jiru yaaddoo nagenyaa osoo hin taane karaan Dasee fi Dabrabirihaan keessa bahu daangessituu saffisaa heddu waan qabuuf isa baqataniitu jedhu obbo Tseehaynew.
''Nus Abbaa taayitaa Daandiiwwanii Federaalaa waliin mariyachuun danqaaleen saffisa daangessan akka ka'an goone amma daandiin kun banaa ta'eera'' jedhan.
Kana dura sa'aatiwwan murtaa'eef daandiin cufamee akka ture yaadatanii, sababni itti cufamaa tures furameera jedhu aang'aan biroon.
Hooggantuun biiroo Daandiifi Geejibaa naannoo Tigraay aadde Almaaz Gabrastaadiiq ''bara 2010 irraa kaasee yaaddoo nageenyaa mudaterraa kan ka'e qaamni itti gaafatama fudhatu waan hin jirreef uummatni filannoo biraa fayyadamuuf dirqameera'' jedhan.
Uummatni naannichaa imala gara Finfineefi Finfineerraa Maqalettis taasisuuf Nannoo Affaar keessa Loogiyaa, fi Samaraa qaxxamuruun imalaa jirus jedhan.
Daandiin kun dheeraa ta'us filanno kanatti fayyadamuuf dirqamaniiru jedhu.
Rakkoo kan furuuf mootummaa Federaalaa fi Ministeera Geejibaa waliin mariin gaggeefamuu himanii, wanti jijjirame garuu akka hin jirre himan.
''Gamaagama qaamolee kan waliin teenyeen, mootummaan maaliif gaafatama akka hin fudhnne kaafne ture. Hanga ammaatti akka mootummatti qaammni gaafatama fudhate hin jiru.''
Waldaan Atoobisoota 50 qabu fi sararoota Dasee keessa bahee Maqalee deemu kan qaban wagga sadii as sarara isaanii jijjiiruun Affaar keessa bahaa akka jiran himu.
Imalli Atoobisii Maqaleefi Dasee gidduu jirus, sababa ''haleellaan qaqabaa jira'' jedhuun adda jituu himu.
Konkolaattotni Finfinnee Maqalee imalan kan Tigraay jedhamee waan yaadamuuf ni gubamu ykn fiddaa isaaniitu cabaas jedhu Waldaaleen atoobisootaa kun.
Olaantummaan seeraa akka hojiirra oolu Naannoon Tigraay gaafate